မကြာခင် အောင်ဘာလေ ထီဆုကြီး ဖွင့်မှာဖြစ်လို့ ထီပေါက်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်း - Cele Platform
မကြာခင် အောင်ဘာလေ ထီဆုကြီး ဖွင့်မှာဖြစ်လို့ ထီပေါက်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်း
ထီပေါက်ခဲ့ရင် ..ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်းဆိုတာ… သိချင်တဲ့သူတွေအတွက် ..တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရုံး ချုပ်ရောက်ရင် အပေါက်ဝမှာ အဝင်အထွက်စစ်ဆေးတဲ့ အန်တီ(သို့)ဦးလေးကို ထီသွားထုတ်မလို့ ပြောပြီး နာမည်ရယ် မှတ်ပုံတင်ရယ်ရေးလက်မှတ်ထိုးရပါမယ် ပြီးရင် ၃လွှာကို ဓါတ်လှေကား (သို့) ရိုးရိုးလှေကားက တတ်သွားပါ ဝင်ဝင်ချင်း ဓါတ်လှေကားဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထီဆုငွေများထုတ်ယူရန်ဆိုပြီး ရေးထားတယ် အာ့မှာ ပေါက်တဲ့ ထီလက်မှတ်တွေကို ထုတ်ပေးပါတယ်။
အဲဒီ ထီလက်မှတ်နောက်ကျော ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ဘက်လက်မနဲ့ လက်ဗွေနှိပ်ရပါတယ် ပြီးရင် လက်ဗွေနားမှာ လက်မှတ်ထိုးပေးရမယ် အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူတွေကို ပေးရပါမယ် ပြီးရင်သူတို့တွေက ဖောင်ဖြည့်ဖို့အတွက် ဖောင် ပေးလိမ့်မယ်ဆုသေးတွေဆိုရင်တော့ တရက်နဲ့ ပြီးပါတယ် ဆုငွေကြီးရင်တော့ ရက်ချိန်းတရက်ပြန်ချိန်းပါတယ်။
ချက်လက်မှတ်ရဖို့အတွက် ဖောင်ထဲက နေရပ်လိပ်စာကို အိမ်ထောင်စုစာရင်းထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းထည့်ပေးရမှာနော် ဖောင်ဖြည့်ပြီးရင် ခဏထိုင်စောင့်ရပါတယ် နာမည်ခေါ်တာနဲ့ ဖောင်ထဲမှာလက်ဗွေထပ်နှိပ်ရပါတယ် တံဆိပ်ခေါင်းဖိုး ၅၀၀ ပေးရပါတယ် ပြီးရင် ဘေးနားက အခန်းကို ဝင်သွားပါ ၊ အဲဒီမှာ စာရေးမ အန်တီကြီးတွေက သူတို့ အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်
လက်မှတ်ထိုးပေး ဆက်သွယ်ရန် ph no. ရေးပေး ပြီးရင် ချက်လက်မှတ်တစ်ခုပေးလိုက်လိမ့်မယ်အဲဒီ ချက်လက်မှတ်ကို လသာလမ်းနဲ့ ကမ်းနားလမ်းက မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ၅ မှာ သွားထုတ်ရပါမယ်။ဆုသေးရင်တော့ ကိုယ် သွားထိုးခဲ့တဲ့ ထီဆိုင်မှာပဲ ထုတ်တာ ကောင်းပါတယ် ၊နို့မို့ဆို သွားရမယ့် ကားခ တံဆိပ်ခေါင်းခ လူစောင့်ရတာနဲ့ အရမ်းအလုပ်ရှုပ်ပါတယ်
၊ချက်လက်မှတ်ရလို့ လသာကို သွားထုတ်တော့လည်း ကားခထပ်ကုန်သေး ဗိုက်ဆာလို့ မုန့်ဝယ်စားရင်လည်း ပိုက်ဆံက ထပ်ကုန်သေးတော်သေးပြီ ဒီလောက်ပါပဲ။ CRD-ShoonLeiKayKhine,Credit – pwintsan
ထီပေါကျခဲ့ရငျ ..ဘယျလိုထုတျရမလညျးဆိုတာ… သိခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ ..တငျပေးလိုကျပါတယျရုံး ခြုပျရောကျရငျ အပေါကျဝမှာ အဝငျအထှကျစဈဆေးတဲ့ အနျတီ(သို့)ဦးလေးကို ထီသှားထုတျမလို့ ပွောပွီး နာမညျရယျ မှတျပုံတငျရယျရေးလကျမှတျထိုးရပါမယျ ပွီးရငျ ၃လှာကို ဓါတျလှကေား (သို့) ရိုးရိုးလှကေားက တတျသှားပါ ဝငျဝငျခငျြး ဓါတျလှကေားဘယျဘကျခွမျးမှာ ထီဆုငှမြေားထုတျယူရနျဆိုပွီး ရေးထားတယျ အာ့မှာ ပေါကျတဲ့ ထီလကျမှတျတှကေို ထုတျပေးပါတယျ။
အဲဒီ ထီလကျမှတျနောကျကြော ဘယျဘကျခွမျးမှာ ဘကျလကျမနဲ့ လကျဗှနှေိပျရပါတယျ ပွီးရငျ လကျဗှနေားမှာ လကျမှတျထိုးပေးရမယျ အိမျထောငျစုစာရငျးမိတ်တူ မှတျပုံတငျမိတ်တူတှကေို ပေးရပါမယျ ပွီးရငျသူတို့တှကေ ဖောငျဖွညျ့ဖို့အတှကျ ဖောငျ ပေးလိမျ့မယျဆုသေးတှဆေိုရငျတော့ တရကျနဲ့ ပွီးပါတယျ ဆုငှကွေီးရငျတော့ ရကျခြိနျးတရကျပွနျခြိနျးပါတယျ။
ခကျြလကျမှတျရဖို့အတှကျ ဖောငျထဲက နရေပျလိပျစာကို အိမျထောငျစုစာရငျးထဲမှာပါတဲ့အတိုငျးထညျ့ပေးရမှာနျော ဖောငျဖွညျ့ပွီးရငျ ခဏထိုငျစောငျ့ရပါတယျ နာမညျချေါတာနဲ့ ဖောငျထဲမှာလကျဗှထေပျနှိပျရပါတယျ တံဆိပျခေါငျးဖိုး ၅၀၀ ပေးရပါတယျ ပွီးရငျ ဘေးနားက အခနျးကို ဝငျသှားပါ ၊ အဲဒီမှာ စာရေးမ အနျတီကွီးတှကေ သူတို့ အဆငျ့ဆငျ့ လုပျဆောငျပွီးနောကျ
လကျမှတျထိုးပေး ဆကျသှယျရနျ ph no. ရေးပေး ပွီးရငျ ခကျြလကျမှတျတဈခုပေးလိုကျလိမျ့မယျအဲဒီ ခကျြလကျမှတျကို လသာလမျးနဲ့ ကမျးနားလမျးက မွနျမာ့စီးပှားရေးဘဏျ ၅ မှာ သှားထုတျရပါမယျ။ဆုသေးရငျတော့ ကိုယျ သှားထိုးခဲ့တဲ့ ထီဆိုငျမှာပဲ ထုတျတာ ကောငျးပါတယျ ၊နို့မို့ဆို သှားရမယျ့ ကားခ တံဆိပျခေါငျးခ လူစောငျ့ရတာနဲ့ အရမျးအလုပျရှုပျပါတယျ
၊ခကျြလကျမှတျရလို့ လသာကို သှားထုတျတော့လညျး ကားခထပျကုနျသေး ဗိုကျဆာလို့ မုနျ့ဝယျစားရငျလညျး ပိုကျဆံက ထပျကုနျသေးတျောသေးပွီ ဒီလောကျပါပဲ။ CRD-ShoonLeiKayKhine,Credit – pwintsan
လိုက်ဖက်ညီစွာ အနုပညာအလုပ်တွေ အတူလက်တွဲလုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ မနောနဲ့ အိချောပို
ကျစ်လှစ်ဖွံထွားတဲ့ ရွှေရင်အစုံအလှတရားတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ နန်းအမရာရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးများ